Iingcebiso zokhathalelo lolusu ngaphambi kokulala | Amadoda aQinisekileyo
Iingcebiso zobuhle zamadoda ngaphambi kokulala
UPaco Maria Garcia | | Zokuthambisa
Iyaboniswa loo nto Ukungalali kakuhle kunokuludala ulusu lwethu. Xa sivuka kubusuku bokungalali, ekuvukeni okungapheliyo, siyabona ukuba ubuso bethu budumbile kwaye buncinci iingxowa phantsi kwamehlo.
Ukuphuma naye esitratweni ukujongeka ngcono, umfanekiso ophilileyo, Kukho amaqhinga anokwenziwa ngumntu wonke ngaphambi kokulala.
1 Iingcebiso ngaphambi kokuba ulale
1.1 Ukuphakama kobuso obulungileyo
1.2 Isithambisi phambi kokulala
2 Kwaye xa uvuka?
Iingcebiso ngaphambi kokuba ulale
Ukuphakama kobuso obulungileyo
Kuyaqinisekiswa ukuba Ukuhlamba ubuso bakho ebusuku kubalulekile kulusu lwethu ukuze lubonakale lusempilweni, kwaye uhlale uphethwe kakuhle. Khumbula ukuba imini yonke ulusu luqokelela ubumdaka; Ngaphambi kokuba ulale, kuya kufuneka ususe le mizila yokungcola.
Esinye isizathu esibalulekileyo esithethelela ukuhlamba kakuhle kukuba, ngeli nyathelo, iimveliso zokuthambisa esiza kuzisebenzisa kamva ziya kusebenza ngakumbi.
Kolu phawu lobuso kukho ukunqanda ukusebenzisa isepha eqhelekileyo, kuba sizibeka emngciphekweni wokonakalisa umaleko wokhuselo lwendalo olugquma ulusu lwethu Ukuba olu luhlu luyawohloka, ulusu lobuso bethu luya kuba sengozini yosulelo kunye nokucaphuka.
Into efanelekileyo yokucoca ubuso bethu kakuhle kukusebenzisa Izinto zokucoca ubuso ezisemgangathweni, iisepha ezikhethekileyo, iigels, amagwebu, njl.
Isithambisi phambi kokulala
Emva kokucoca ubuso, kuya kufuneka ukusasaza imveliso esemgangathweni yokuthambisa ukondla kunye nokunyamekela ulusu. Izinto zokuthambisa zasebusuku ziyasebenza kubafazi, nakumadoda. Sele zininzi iimveliso ezithile zamadoda, ekufuneka zisetyenziswe ngaphambi kokuba ulale.
Xa kufikwa ekugcineni ezi zithambisi, iingcali ziyacebisa ivenkile efrijini, ukuze ibe nefuthe elikhulu.
Kwaye xa uvuka?
Ubuso obudumbileyo esinabo ngamanye amaxesha xa sivuka, bunokukhululeka kubo amanzi abandayo kakhulu. Siza kufaka iityhubhu zomkhenkce kwisitya esinamanzi, siya kumanzisa ilaphu lokuhlamba kwaye siya kulibeka ebusweni ngobunono.
Imithombo yemifanekiso: Impilo180 / IPlaza enkulu yePlaza
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Iingcebiso zobuhle zamadoda ngaphambi kokulala
Iikhadigigans ezikhanyayo ezine kunye nesitayile sehlobo
Indibaniselwano emithathu yeebhulukhwe ezinqamlezileyo kunye nezihlangu kule ntwasahlobo